Ukutya okuThengiweyo kweengxowa abavelisi kunye nababoneleli - China ukuhanjiswa kokutya kweengxowa zefektri
Ibhegi ukutya okungangenwa pizza
Inombolo Inombolo: FDB21002
Inkcazo: Ukutya okutya okungamanzi kwe-pizza
Iinkcukacha Product: ipholiyesta / PEVA lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana nokutya.
Umsebenzi: Gcina ukutya okanye iziselo zibanda okanye zishushu malunga neeyure eziyi-7-8. Ifanelekile ngaphandle kunye nokunyusa.
Inombolo Inombolo: FDB21001
Ukutya okufudumeleyo okungenamanzi okufudumeleyo okuhambisa ukutya kwiivenkile zokutyela
Le ngxowa yokuhambisa ukutya yinto eyaziwayo kakhulu. Izinto zangaphandle zenziwe ngeTarpaulin ehlala ixesha elide. Ukuxinana okuphezulu kokuxinana kwezinto ezomeleleyo kunye nokuhlaziywa okuphuculweyo kobungqina be-Alu foil yesikhonkwane somthwalo opholileyo osebenza kunye ukugcina iziselo / ukubanda kokutya okanye ukutshisa iiyure ezininzi kunye nokulwa nokuvuza. Umtya obonakalisayo unokukhanyisa ebumnyameni okhuselekileyo kakhulu kuhanjiso. Ubhaka opholileyo unesahluli sangaphakathi esinokwenziwa ngamacandelo amabini ahlukeneyo kwaye siqhutywa ngohlobo olwahlukileyo ...
Ipholiyesta yokuhambisa ukutya okufudumeleyo kunye nengxowa yokutya enokuphinda isebenze kwiivenkile zokutyela, ukuqhuba kwabaqhubi, uber
Le ngxowa yokuhambisa ukutya yinto eyaziwayo kakhulu. Izinto zangaphandle yi-1680D polyster ehlala ixesha elide. Iipokotho ezisecaleni zokuthwala izincedisi, iselfowuni, amakhadi oshishino, iitikiti zeodolo, iincwadana, njl.Ifoyile yealuminium kunye nokutya kweFO foam kushushu okanye kupholile, imitya iyahlengahlengiswa. Le mveliso ifumaneka ngokuprintwa kuyilo lwakho, ifoto, ilogo okanye isicatshulwa! Wamkelekile ukuthumela thina yophando! Isampulu yesitokhwe simahla ukuba singahamba! Inombolo Inombolo: PDB2005 Ubungakanani: 34 * 25 * 38cm Inkcazo: Ukutya kokutya ibhegi P ...
Ihowuliseyili ukupholisa ubhaka ibhegi ukutya kunye logo siko
Inombolo Inombolo: PDB2002
Ubukhulu: 42 * 42 * 48cm
Inkcazo: Ihowuliseyili ibhegi epholileyo sasemini ukutya ibhegi kunye logo siko
Iinkcukacha Product: Tarpaulin / Aluminium ngefoyile ye lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana nokutya.
MOQ: 500pcs ngombala ngamnye
Ihowuliseyili thermal zigqunyiwe casserole yenethiwekhi kunye logo siko
Abaphathi beepikniki ezinkulu basebenzise njengeengxowa zokutya, iihambo zokuthatha izinto zokubala kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla xa ungekho ekhaya. Izinto zethu ezipholileyo nezicocekileyo ezipholileyo kunye neebhegi zenziwe kakuhle ziimveliso zabathengi eziza kujongeka zihle ngegama lombutho wakho. Wamkelekile ukuthumela thina yophando! Isampulu yesitokhwe simahla ukuba singahamba! Inombolo Inombolo: PDB2008 Ubungakanani: 47 * 54 * 20cm Inkcazo: Ipicnic enkulu yeCasserole carrier ...
Isiko sasemini sigqunyiwe esenziwe sasemini ibhegi epholileyo ngeengxowa zamagxa
Le ngxowa yokuhambisa ukutya yinto eyaziwayo kakhulu. Izinto zangaphandle zi-1680D kunye nePVC edibeneyo ehlala ixesha elide. Umtya obonakalisayo ungadanyaza ebumnyameni, ubhaka unesahluli sangaphakathi esinokwenziwa ngamacandelo amabini ahlukeneyo kwaye siqhutywa ngeendlela ezahlukeneyo. Ubhaka wethu wokuHanjiswa kokutya wenzelwe ngokufanelekileyo ukuhambisa 'lula xa behamba okanye behambisa ngesithuthuthu / ngebhayisekile. Ifoyile yealuminium yokutyabeka egcina ukutya kushushu ixesha elide. Ev ...
Ukuhanjiswa kokutya okufudumeleyo kwiivenkile zokutyela, ukuqhuba kwabaqhubi, uber
Le ngxowa yokuhambisa ukutya yinto eyaziwayo kakhulu. Izinto zangaphandle Mesh leyo ixesha elide kakhulu. Ifoyile yealuminium kunye nokutya kwe-foam ye-PE kushushu okanye kupholile, imitya iyahlengahlengiswa. Le mveliso ifumaneka ngokuprintwa kuyilo lwakho, ifoto, ilogo okanye isicatshulwa! Wamkelekile ukuthumela thina yophando! Isampulu yesitokhwe simahla ukuba singahamba! Inombolo Inombolo: PDB2006 Ubungakanani: 44 * 30 * 31cm Inkcazo: Ukuhanjiswa kokutya Ingxowa yemveliso Iinkcukacha: Mesh / Aluminium ngefoyile ye lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umphetho uya kuba kukutya c ...
Ihowuliseyili sigqunyiwe thermal sasemini liphole ibhegi nge logo eprintiweyo
Le ngxowa yokuhambisa ukutya yinto eyaziwayo kakhulu. Ubhaka wethu opholileyo wenziwe ngomsebenzi ophakamileyo we-1680D ipholiyesta, izinto ezixineneyo zokugquma izinto kunye nokuhlaziywa okuphuculweyo kobungqina be-alu foil liner yesikhwama esipholileyo sisebenza kunye ukugcina iziselo / ukubanda kokutya okanye ukutshisa iiyure ezininzi kunye nokuchasana nokuvuza. Izinto zokupholisa ubhaka ongangeni manzi zenziwe ngelaphu elinzima elinomsebenzi elingenakukrazula, ukukrazula okanye ukukrwela kodwa kunye nokukhanya okulula ...